Alefaso amin'ny alàlan'ny PubPub - AfricaArXiv
Alefaso amin'ny PubPub
Momba ny PubPub
PubPub, ny tetikasan'asan'ny Vondrona Fahalalana Fahalalana, natomboka tamin'ny taona 2017. Manohana ny sehatry ny loharanom-baovao misokatra ny bokin'olon-tsotra sy boky momba ny mpamoaka hevitra avy amin'ny anjerimanontolo sy ny fiaraha-monina, ary efa ho an'arivony ny famoahana bozaka namorona sy notazonin'ireo manam-pahaizana sy akademika tsirairay. departemanta. Ny PubPub dia mirindra amin'ny fizotry ny famoronana fahalalana amin'ny alàlan'ny fampidirana ny resaka, ny anaram-peo ary ny fanontana ho an'ny boky nomerika fohy sy lava.
Raha efa niasa ianao, izao dia miasa, na mikasa ny hanao fikarohana mifandray amin'ny valan'aretina coronavirus ary maniry hanao fandefasana, azafady araho ny torolàlana etsy ambany.
1. Fandraketana ny horonantsary
Azafady atoroy azafady ny fitadiavana na teboka fikarohana manokana.
Lazao ny anaranao, ny fifandraisananao, ny fifehezana ary ny firenenao.
Iaraho midinika ireo fahalalana mifandraika azonao na manantena anao hahazo amin'ny alàlan'ny asanao, anisan'izany ny fomba sy ny siansa.
Manaova soso-kevitra vokatry ny tsoakevitrao na ny fandinihanao. Raha azo atao dia azafady asio azafady hoe iza no mahita io asa tena ilaina io (sehatra hafa fikarohana na asa mitohy, fiaraha-miasa mety).
Lazao ny andininy faha-3 ka hatramin'ny 5, ao anatin'izany ny anao manokana. Azafady atolotra ny fampahalalana ampy (anaran'ireo mpanoratra, taom-baovao publication, lohatenin'ny diary, lohateny lahatsoratra) mba hahitan'ny tarika anay. Raha azo atao dia ampio ny doi tsirairay amin'ny taratasy fandefasana.
Lazao fa manaiky ny fizarana an'ity firaketana ity ianao Fahazoan-dàlana CC-BY.
2. Ny fandefasanao ny firaketanao
Azafady azafady izany teny. Aza hadino ny mameno ny saha takiana sy mampakatra ny firaketanao. Raha manana fanontaniana na olana ianao dia andefaso mailaka: info@africarxiv.org
3. Inona no hitranga?
Aorian'ny fandefasana am-pahombiazana ny firaketanao dia afaka manantena ny hihainoana anay ianao ao anatin'ny 5 andro miasa.
Raha ekena, ny fandefasanao dia adika ary ampiana fanondro mifandraika amin'izany. Ny rakitra rakitsary / sary dia alefa amin'ny Internet mankany amin'ny Angonin'ny AfricaArXiv PubPub miaraka amina Crossref DOI ary CC BY 4.0 fahazoan-dàlana fanoratana .. Halefa ao amin'ny iray amin'ireo sehatra iarahan'ny AfricaArXiv (OSF, ScienceOpen, na Zenodo) ny rakitra an-tsoratra.
Hanampy ny dikan-teny AI / milina amin'ny fiteny 2-3 isika raha toa ka manondro ny fandefasanao ary indrindra raha misy fiteny manan-danja mba hampidirina noho ny teny isam-paritra.
Raha sendra misy olana, fanontaniana na ahiahy, mandefasa mailaka: info@africarxiv.org
Vondron'ny fahalalana ho avy & AfricaArXiv	 23rd Aprily 2020	 No Comments